ATN: October 2008
နှင်းကို ငါ တွေ့ရတယ်..
နှင်းကို ငါ ပွေ့ရတယ်..
ညနေဆည်းဆာကို ကိုယ်ရုံလုပ်တဲ့ ပင်လယ်တစင်း..
မေတ္တာယက်ရှယ်ရင်း ရီဝေတဲ့ ၀ိုင်နီတခွက်...
ဒဏ်ရာတွေ ရခဲ့သမှ အတုံးအရုံး...
သို့သော်လည်း အရှုံးကို ဖတ်စာမလုပ်ခဲ့...
ရင်ခုန် စိတ်စော ဆောင်းတရက်...
ဒေါနနဲ့ သောင်ရင်း ရင်ငွေ့မှာ
အလံတလက်ကို အတူတူ လွှင့်လို့ ....
အလင်းကို တူးထုတ်နေတဲ့ ပန်းတွေ
မြန်မာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး - မ.က.ဒ.တ. ဖွဲ့စည်းသည့်
အနှစ် နှစ်ဆယ်ပြည့် နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ အခါသမယအတွက် ဂုဏ်ယူခြင်းနှင့်အတူ
မ.က.ဒ.တ. အလံတော်အား ယနေ့တိုင်ကိုင်စွဲကာ
စစ်အာဏာရှင် စနစ်အား တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေဆဲဖြစ်သော မ.က.ဒ.တ ရဲဘော်များအား
ဟိုး လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆ နှစ်ဆီက လှုပ်ရှားမှုလေး တခုပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးတိုက်ပွဲလို့ အမည်ပေးထားတဲ့ တေးစုတခုကို အစစ ပြီးပြည့်စုံစေဖို့ ကျနော်တို့ အားလုံး အစွမ်းရှိသမျှ အားထုတ်ခဲ့စဉ် အချိန်ကပါ။
ကျနော် အိမ်ပြောင်းရင်းနဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပြန်လည်နေရာချရင်း အမှတ်တရတွေက သူ့ အလိုလို ခုန်ထွက် လာတာပါ။ အဲမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးတိုက်ပွဲ-နဂိုရ်ထုတ်စဉ်က စာအုပ်လေး ပြန်ထွက်လာတယ်။
အဲ သီချင်းစာအုပ်လေးက ကျနော်နဲ့ ကျနော့် အကိုရင်းလို ခင်မင်ရတဲ့ Mr. BURMA (ကာတွန်း-၀င်းထွန်း) ပေါင်းပြီး ကိုမွန်းအောင်အတွက် လုပ်ပေးခဲ့တာပါ။
အမိဗမာပြည်ထဲမှာ သီဆိုခွင့် မရခဲ့တဲ့ သီချင်းအားလုံးကို ကိုမွန်းအောင်ကပဲ ဆိုခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ တနေရာမှာ အသံသွင်းပြီး ဖြန့်ဝေခဲ့တာပါ။ အဲသီချင်းတွေကို ခုထက်ထိ လူငယ်တွေ ဆိုနေကြတုန်းပါပဲ။
ကျနော် Scan ဖတ်လို့ရသမျှအားလုံးကို အမှတ်တရ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မြစ်ရဲ့ရင်ကတော့ ပတ်ကြားတွေ အက်အက်
မြစ်ရဲ့ အရောင်ကို မောင်ရင် မသိသမျှ
(အပြင်းစားတပုဒ်လောက်ရေးပါဦးလို့ ဆိုတဲ့ ညီငယ် ဆောင်းယွန်းလအတွက် အမှတ်တရ)
မနေ့က အလုပ်ထဲမှာလည်း တနေ့လုံး ခေါင်းကိုက်နေတာရယ် အိမ်ပြန်ရောက်တော့လည်း ညာဖက် ဇက်ကြော တဖက်တည်း တက်နေတာရယ်နဲ့ ကွန်ပြူတာ တောင် မဖွင့်နိုင်ပါဘူး အိပ်ယာထဲမှာ လှဲနေရတာ။ ဇက်ကြောမှာ သံချောင်း တချောင်း ထိုးထည့်ထားသလိုပဲ ကိုက်နေတာ။ ဒါနဲ့ပဲ ရေးလက်စ ဖြစ်နေတဲ့ သူပုန် တယောက်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ (၈) ကို ဆက်ရေး ဖို့ဟာ မရေးနိုင်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီနေ့တော့ အလုပ်လည်း နားတာနဲ့ ကွန်ပြူတာလေး ဖွင့်ပြီး Google Reader က ယူထားတဲ့ Feed တွေ ဖတ်မိတေ့ာ တူမောင်မျိုး က သူ့ရဲ့ သီတင်းကျွတ် ဆိုတဲ့ပို့စ်မှာ ကျနော့်ကို အကန်တော့ခံတဲ့ စာရင်းထဲ ထည့်ထား တာတွေလို့ သူ့အိမ်လေးဆီ လိုက်သွားပြီး ဆုသွားပေးရပါသေးတယ်။ နောက်တော့ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်ပြီး ကိုယ့်ဘလော့ ကိုယ်ကြည့်မိတော့ ညီမငယ် ခေါင်ခေါင် ကလည်း ဆီပုံးထဲမှာ လာကန်တော့ သွားတာ တွေ့လိုက်ရလို့ သူ့ကိုလည်း ဆုပေးလိုက်ရပါသေးတယ်။
သြော်- ကလေးတွေ ကိုယ့်လာကန်တော့မှ ကိုယ်က ကန်တော့ခံရတဲ့ အသက်အရွယ်တန်း ထဲကို ရောက်နေမှန်း ကိုယ့်ဘာသာ ခုမှပဲ သတိရတော့တယ်။ အဲဒါနဲ့တဆက်တည်း ရင်ထဲ မှာလည်း ခံစားချက်တွေ တနင့်တပိုး ဖြစ်လာတာနဲ့ ခေါင်းကိုက် ဇက်ကြော တက်နေတာကို ခဏ မသိချင်ယောင်ဆောင်ရင်း ဒီပို့စ်လေးကို ရေးမိပါတယ်။
ကျနော်တို့ အမိဗမာပြည်မှာ သီတင်းကျွတ်ဆိုရင် ကလေးတွေ အားလုံးက ပျော်ကြတယ်။ အဖိုးအဖွား အမိအဘက အစ ဦးလေး ဒေါ်ကြီးတွေပါ မကျန် ရပ်ကွက်ထဲက သက်ကြီး ရွယ်အိုတွေ အဆုံး အားလုံးကို သွား ကန်တော့ကြ၊ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံနဲ့ ပြစ်မှားမိတဲ့ အပြစ်တွေမှ ခွင့်လွှတ်ဖို့ရာ တောင်းပန်လေ့ ရှိကြ ပါတယ်။ လူကြီးတွေ အားလုံးကလည်း ဆုတွေ မျိုးစုံ ပေးပေါ့လေ။ အတော့ကို ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ မြန်မာ့ လူမှု အလေ့အထလေးပါ။ လူကြီးတွေကို ကန်တော့ ပြီးပြီဆိုရင် လူကြီးတွေက မုန့်ဖိုး ပြန်ပေးကြလေ့ရှိတယ်၊ မုန့်တွေလည်း စားရလေ့ရှိတယ်။ အဲတော့ သီတင်းကျွတ်ပြီဆို ကလေးတွေကတော့ ပျော်နေကြတာပါပဲ။
ကျနော် လူမှန်း သိကတည်းက အဲလိုပျော်ခဲ့ရတဲ့ အပျော်ဟာ ၁၉၈၇ ခုနှစ် သီတင်းကျွတ်မှာ နောက်ဆုံးပါပဲ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ နောက်နှစ်ဖြစ်တဲ့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကစပြီး ခုသီတင်းကျွတ်ထိ နှစ်ပေါင်း ၂၀ တိုင်တိုင် ကျနော့် မိဘ ၂ ပါးနဲ့ အဖိုးအဖွားတွေ ဦးကြီးတွေ ဒေါ်ကြီးတွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မျက်နှာချင်းဆိုင် ကန်တော့ခွင့် မရခဲ့တော့လို့ပါပဲ။ ၁၉၈၈ က စပြီး နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာ အဝေးကနေပဲ မှန်းပြီး ကန်တော့ခဲ့ရတာ ခုသီတင်းကျွတ်ထိ ပါပဲ။ ဘယ်တော့များမှ မျက်နှာချင်းဆိုင် ကန်တော့ခွင့် ရမလဲ ဆိုတာလည်း မသိသေး ပါဘူးလေ။ ဒါမဲ့လည်း ဒီလိုပါပဲလေ အဲလိုမျိုးဘ၀ဟာ ကျနော် တယောက်တည်းမှ မဟုတ်တာပဲ။ ကျနော့်လို ဘ၀တူ ညီတွေ အကိုတွေ အမတွေ ညီမတွေလည်း အများကြီးရှိနေတာပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့ အမိ ဗမာပြည်မှာ နောက်ဆုံး ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ သီတင်းကျွတ် တခုအပြီး နောက် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာတဲ့ အခါကျတော့ ကျနော်ကို့ ကန်တော့တဲ့ ကလေးတွေတောင် ရှိနေပြီကော။
တခါတခါမှာ ဘ၀ဆိုတာ အိပ်မက်တခုလေလား။ အနှစ် ၂၀ ဆိုတာကရော လက်ဖြောက် တချက် တီးလိုက်သလိုပဲလား။ အဲလိုလည်း မဟုတ်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ အနှစ် ၂၀ က ကျနော်တို့ နှလုံးသားတွေကို အမှုန့်ဖြစ်အောင် အတင်း ဖြစ်ညှစ်ချနေတယ်။ အမှုန့် မဖြစ်သွားပေမယ့် နာကျင်မှုကို ခံစားကြရတယ်။ ဒါမယ့် အသံ မထွက်ဘူး။ ထွက်စရာ အသံတွေ ကုန်သွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေ။ ၁၉၈၈ ရဲ့ ရှစ်လေးလုံး လမ်းမတွေပေါ်မှာ ကျနော်တို့ အစွမ်းကုန် အော်ဟစ် ပစ်ခဲ့ကြပြီးပြီမို့လား။
အဲ အနှစ် ၂၀ အတွင်းမှာ ကျနော့် အဖိုးတွေ အဖွားတွေ အားလုံး ဆုံးပါးသွားတယ်။ ဦးလေးတချို့ အဒေါ်တချို့ ဆုံးပါးသွားတယ်။ ကျနော့် ဖခင်ကတော့ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေပါသေးတယ်။ အမေကတော့ ဒီနှစ် တန်ခူးလမှာပဲ ဆုံးပါးခဲ့တာပါ။ ခု စာကို ရိုက်နေရင်းနဲ့ တောင် အမေ့ကို သတိတရ ဖြစ်လာတာ ကျနော့် လက်တွေ တုန်ယင်ပြီး စာတွေကို မျက်ရည်တွေ ကြားမှာ မှုန်မှုန်ဝါးဝါးပဲ မြင်ရတော့တယ်။ ကျနော့်ကို ပြန်တွေ့ဖို့ အမေ အနှစ် ၂၀ စောင့်ခဲ့ဖူးတယ်လေ။
ခုတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက အမြဲလို ကြားနေကြဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့အသံ ရေဒီယိုက သီချင်းတပုဒ်နဲ့ အဖေနဲ့ အမေကို ကျနော် ကန်တော့ လိုက်ပါတယ်။ သီချင်းကလေးကတော့ အမည်က မိသားစု ကန်တော့ပွဲ လို့ပဲ မှတ်မိပါတယ်။ တေးရေးသူနဲ့ တေးဆိုသူ အမည်တွေကိုတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ စာသားတွေလည်း မှတ်မိသလောက်လေး ရေးထားတာပါ။ အနည်းငယ် လွဲကောင်းလွဲနိုင်ပါတယ်။ အဖေနဲ့ အမေကို သတိရတဲ့ အခါတိုင်း ကျနော် တယောက်တည်း အသံ မထွက်ပဲနဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဆိုဆိုငြည်းမိတတ်တဲ့ သီချင်းလေးပါ။
လူလားမြောက်တဲ့ အရွယ်ကတည်းကလေ.... လောကဓံကို.... ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံခဲ့ပါပေ.... နိမ့်ချည်တခါ... သာချည်တလှည့်ရယ်နဲ့.... သမုဒယနယ်မှာ.... ကျင်လည် ကျက်စားကာ.... မအားလပ်နိုင်ရှာပေ.... လောကဓမ္မတာ.... သောကအဖြာဖြာ.... ကြုံတွေ့ရပေ.... ချစ်သော ဖေဖေ ..... ချစ်သော မေမေ ..... မတွေ့တာ ကြာလေလေ.... ပို၍သတိရလေလေ .... ရင်၌လွယ်ဖွား.... သားသမီးများက... အတိုးချ ကန်တော့ပါရစေ.....
မြင့်မိုရ်တောင်ဦး.... ကျေးဇူးဂုဏ်တွေ.... ဆပ်လို့ မကုန်ပေ.... သီတာရေ တပေါက်ကလေး.... ကျရုံမျှနဲ့.... မိဘတို့ဝမ်း ..... ငြိမ်းစတမ်းပေ..... ဖုဝါးလက်နှစ်လုံး ..... ပုခုံး လက်နှစ်သစ် ..... ၀ါးဖတ်တော် ကစီနှစ်နဲ့ .... လူဖြစ်အောင်ကျွေး..... မှက်၊ ခြင်၊ ယင် ဘေးမသန်းရအောင် ... ပင်ပမ်းကြီးစွာ.... မွေးမြူရပေ .... သည်ကျေးဇူး ဂုဏ်တွေ .... သည်ကျေးဇူး ဂုဏ်တွေ .... ရည်မျှော်မှန်းလို့... သား ကန်တော့ပါတယ်လေ. ... ကျေးဇူးရှင် ဖေဖေနဲ့ မေမေ ......
ငယ်စဉ်တောင်ကျေး.... ကလေး ဘ၀က ..... တေးဆိုလို့ ချော့မြှူပုံတွေ.... မှတ်မိနေသေးပေ.... ခိုဖြူ ခိုပြာ ခိုဝါနက်ကယ် .... အဖမ်းခက်လို့ ..... ဆိုတဲ့ အသံတွေ .... မိတ္ထီလာ ကန်တော်အောက်က .... ဖားကလေးတွေ .... ကောက်ကာ ပေးဖို့ ... မှာလိုက်တဲ့... အသံလေးတွေ... သမီးဖြင့် .... ကြားယောင်မိတယ်လေ......
သြော......ကဠလတ်ရေကြည်... သန္ဓေတည်ကတည်းက ... ပူ၊ ငံ၊ စပ်၊ ခါး .... ရှောင်ရှားကာလေ .... မကောင်းမြစ်တား .... ကောင်းရာ ညွှန်လတ် .... ရင်းနှီး ပေးဝေးစေ ..... အတတ်ကိုလည်း သင်စေ... ထိမ်းမြားခြင်း ၀တ် ငါး အင် .... ကျေပွန်ပါပေ...... မကောင်းသော မေတ္တာမျိုးနဲ့ ..... သားသမီးဆိုးတွေကိုလည်း.... ပစ်ရိုး ထုံးစံ မရှိခဲ့ပေ ..... တို့ ဘုရား သော်မှ .... နို့ တလုံးဖိုး ကြေ ... အနန္တဂိုဏ်းဝင် ....ကျေးဇူးရှင် မိဘ နှစ်ပါးကို..... သားလေ.... ကန်တော့ပါတယ်လေ......
တအူတုံဆင်း... တို့ မောင်နှမ အရင်းတွေ ... ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ကရုဏာ ထားလို့လေ..... ကျေးဇူးရှင် မိဘ နှစ်ပါးရဲ့ .... သြ၀ါဒ စကားတွေ.... မကြားရတာ ကြာခဲ့ပြီလေ ..... ချစ်သော ဖေဖေ ..... ချစ်သော မေမေ ...... သားတို့ သမီးတို့.... လက်ဆယ်ဖြာ ယှက်ကာမိုးလို့ ..... ရှိခိုးလို့ ကန်တော့ပါရစေ..... ကျေးဇူးရှင် ဖေဖေနဲ့ မေမေ ..... ကျေးဇူးရှင် ဖေဖေနဲ့ မေမေ .......
ဗမာပြည်သား မိတ်ဆွေများ ညီအကို မောင်နှမများ အားလုံး မိဘ ညီအကိုမောင်နှမ ဆွေမျိုး မိတ်သင်္ဂဟတွေနဲ့ ကင်းဝေးကွာခြားရသော ဒုက္ခမှ လွတ်ကင်းနိုင်ကြပါစေသတည်း။
ကလူသစ်ပြောလို့ ကမန်းကတမ်း - ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည် - ထည့်လိုက်ရပါတယ်။ ကျေးဇူး ကလူသစ်ရေ့။
အဖြူရောင် ပန်းတပွင့် ဖြစ်ပြီး
အနက်ရောင် ပန်းတပွင့်လည်း ဖြစ်သည်။
၁ + ၁ = ၁ ဖြစ်သည့် အရာ ဖြစ်ပြီး
၁ + ၁ = ၂ ဖြစ်သည့် အရာလည်း ဖြစ်သည်။
တခါတရံ ၁ + ၁ = ၀ ဖြစ်တတ်သည့် အရာ ဖြစ်ပြီး
တခါတရံ ၁ + ၁ = အဆုံးအစမဲ့ ဖြစ်တတ်သည့် အရာလည်း ဖြစ်သည်။
စီးကရက် မီးခိုးငွေ့တခုလည်း ဖြစ်ပြီး
မီးမညှိရသေးသော စီးကရက် တလိပ်လည်း ဖြစ်သည်။
ကြည့်မှသာ မြင်ရသော လရောင်အပြာ ဖြစ်ပြီး
မကြည့်ဘဲ မြင်နေရသော လရောင် မှုန်မွှားလည်း ဖြစ်သည်။
ညဉ့်အခါကျမှသာ မြင်ရသော ပိုးစုန်းကြူးတကောင် ဖြစ်ပြီး
နေ့အခါတွင် မမြင်ချင်အဆုံးသော ပျံလွှားငှက် တကောင်လည်း ဖြစ်သည်။
အနက်ရှိုင်းဆုံး အရပ်မှလာသော အတိုးတိမ်ဆုံး အသံဖြစ်ပြီး
အနိမ့်ပါးဆုံး အရပ်မှလာသော အပေါက်ကွဲဆုံး မိုးခြိမ်းသံလည်း ဖြစ်သည်။
လေဟာနယ်တကာထက် ပိုမို လစ်ဟာနေသော အရာ ဖြစ်ပြီး
အသိပ်သည်းဆုံးဒြပ်ထုများကို သယ်ဆောင်ထားသည့် တွင်းနက်တလုံးလည်း ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာဦးကျမ်းပါ အမှောင်တကာထက် ပိုမိုမှောင်သော အမှောင် ဖြစ်ပြီး
ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းသော အလင်းထက် ပိုမို တောက်ပသော အလင်းရောင်လည်း ဖြစ်သည်။
ရေသာမက အခြားအရာများကိုပါ ထည့်ယူသယ်ဆောင်နိုင်သော ရေပုံး အလွတ် တပုံး ဖြစ်ပြီး
အခြားအရာများမှလွဲ၍ မည်သည့် ရေကိုမျှ မသယ်ယူနိုင်သော ခြင်းကြားတလုံးလည်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော် အာဏာနှင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကို သူ့ခြေဖ၀ါးအောက်မှာ နင်းထားသူ ဖြစ်ပြီး
နိုင်ငံတော် အာဏာနှင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကို အံ့သြဘွယ်ရာ သူ့ ဦးခေါင်းထက်မှာ တင်ထားနိုင်သူလည်း ဖြစ်သည်။
တစုံတရာများဖြင့် ဖြည့်ဆည်း ပြည့်နှက်နိုင်စေသော အခန်းလွတ် တခု ဖြစ်ပြီး
ဖြည့်ဆည်းပြီးသည့်တိုင် အမြဲတစေ လိုအပ်နေတတ်သော ထပ်မံဖြည့်စွက်နေရဦးမည့် ကွက်လပ်တခုလည်း ဖြစ်သည်။
တစုံတရာနှင့် တစုံတဦး အကြား၊ တစုံတဦးနှင့် အခြား တစုံတဦးအကြား ချည်နှောင်ထားသော ကိုယ်ပျောက်ကြိုး တချောင်း ဖြစ်ပြီး
သူ၏ အတိုင်းအဆကို အလျား x အနံ x အမြင့် = ထုထည် ဟူသော ပုံသေနည်းဖြင့် ညီမျှခြင်းချမရသည့် ကြီးမြတ်သော ကြိုးတချောင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ဦးနှောက်ဆိုသော အရာမှ ထွက်လာပြီး နှလုံးသားဆိုသောအရာကို ကျဉ်စက်ဖြင့် သွားသွားတို့တတ်သော လျှပ်စစ်လှိုင်းများ ဖြစ်ပြီး
နှလုံးသားဆိုသော အရာမှ ထွက်လာပြီး ဦးနှောက်ဆိုသောအရာကို လက်ထိပ်ခတ်ထားလေ့ရှိသော အလင်းလှိုင်းများလည်း ဖြစ်သည်။
သူကိုယ်တိုင် ဧ၀လည်း ဖြစ်လေသည်။
သူကိုယ်တိုင် တားမြစ်ထားသော ပန်းသီးတလုံးဖြစ်ပြီး
သူကိုယ်တိုင် ဖန်ဆင်းတတ်သော ဘုရားသခင်လည်း ဖြစ်လေသည်။
ကူးစက် ခံစားနိုင်ကြဖို့ရာ အောက်ပါ မိတ်ဆွေများကို TAG ပါသည်။ အချိန်ရက ရေးကြပါရန်။
mirror၊(ရေးပြီး) တူးတူးသာ၊(ရေးပြီး) ခေါင်ခေါင်၊(ရေးပြီး) လင်း၊(ရေးပြီး) သက်ဝေ၊(ရေးပြီး) ပန်ဒိုရာ၊(ရေးပြီး) တောကျောင်းဆရာ၊(ရေးပြီး) မျက်ဝန်းနက်၊(ရေးပြီး) ဇင်ယော်၊ တူမောင်မျိုး၊(ရေးပြီး)
သစ်နက်ဆူး၊(ရေးပြီး) မျိုးဝင်းဇော်၊ လင်းထက်၊(ရေးပြီး) မောင်ဖုန်းမြင့်၊ (ရေးပြီး)
at 7:13 PM 13 comments: